FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANATOLIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Anatolianina
Anatolian Shepherd / Great Pyrenees Alika mifangaro
'Shadow the Anatolian / Pyrenees hybrid miaraka amin'ny iray amin'ireo osy Shadow dia dimy taona amin'ity sary ity. Mipetraka amin'ny 16 hektara izahay miaraka amin'ny osy roapolo, jennies roa, soavaly iray, alika valo (alika dimy), saka iray trano, saka roa, kitapo iray ary akoho be loatra tsy tambo isaina. Miasa alina ny aloka ary matory amin'ny antoandro. Raha misy vahiny na biby hafahafa tonga eo am-bavahady dia ao anatin'ny iray segondra i Shadow. Tena miaro ny osy izy ary raha omenao fotoana hijerena anao izy dia avelany irery ianao ary tsy hihevitra anao ho fandrahonana ho an'ny osy. Tsy mbola nanandrana nanaikitra olona mihitsy izy. Azoko antoka fa hanafika izy raha mahita fandrahonana. '
Ny Anatolian Pyrenees dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpiandry ondry Anatolianina ary ny Pyrenees mahafinaritra . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Aloky ny alika mifangaro ny Anatolianina / Pyrenees
'Aloka sy bera alika vaovao, ary koa Anatolian / Pyrenees — ny alikako rehetra dia raikitra ary ny zaza vaovao dia hamboarina rehefa antitra izy. Enina herinandro i Bear ary dimy taona i Daisy amin'ity sary ity. Alika mpiambina osy i Bear rehefa miofana. '
'Bob dia hybrid Pyrenees Anatolian Shepherd 4 taona. Mpikambana an-trano mangina izy amin'ny antoandro fa mpiaro mafy ny ondrintsika sy ny akoho amin'ny alina. '
Bob the Pyrenees / Anatolian Shepherd dog (Anatolian Pyrenees) amin'ny 4 taona
'Ity i Lucy, hybrid Pyrenees / Anatolian Shepherd ahy lehibe amin'ny 2 taona. Alika mpiambina tena tsara izy ary tena lehibe !!! '
'Ity i Boomer, zanakay 70-pon., 1-taona 1/2 Pyrenees Lehibe ary 1/2 Anatolianina pup. Nentinay izy sy ny zandriny lahy Apollo (Lab mainty 3 volana) nankany amin'ny renirano eto Ft. Leonard Wood noho ny rompany voalohany tao anaty rano. Nandeha an-tongotra izy ary niditra anaty rano malama nankafy isa-minitra. Nanandrana nandry teo amin'ny lalina aza izy ... nandehandeha hatrany ambany izy. Tonga ara-potoana izy nahita ny tenany… mampihomehy loatra! '
'Ity i Boomer, zanakay 70-pon., 1-taona 1/2 Pyrenees Lehibe ary 1/2 Anatolia zanak'alika Anatolia mifanena amin'ny Apollo zandriny lahy tia lalao Alika Black Lab Sambany. '
Lisitry ny alika mpiandry omby mpiompy Anatolianina
shar Pei sy ny Amerikana bulldog Mix
fifangaroana bulldog anglisy taloha sy amerikana
Sary pitbull 1 taona
alika mpiandry mpiady boxer mifangaro alika kely
Mini aussie Cocker spaniel afangaro